Susa ukukhetha: Izixazululo Zokunika amandla Idatha Yokumaketha ze-Salesforce AppExchange | Martech Zone
Kubalulekile ukuthi abathengisi basungule uhambo olu-1:1 namakhasimende esikalini, ngokushesha, nangempumelelo. Enye yezinkundla ezisetshenziswa kakhulu zokumaketha ezisetshenziselwa le njongo yiSalesforce Marketing Cloud (I-SFMC).
I-SFMC inikeza amathuba anhlobonhlobo futhi ihlanganisa lokho kusebenza okuningi namathuba angakaze abonwe ukuze abakhangisi baxhumane namakhasimende ezigabeni ezahlukene zohambo lwabo lwamakhasimende. I-Marketing Cloud ngeke, ngokwesibonelo, inike amandla abakhangisi ukuthi bachaze amamodeli wabo wedatha, kodwa futhi ikwazi ngokuphelele ukuhlanganisa noma ukulayisha imithombo eminingi yedatha, eyaziwa ngokuthi izandiso zedatha.
Ukuguquguquka okukhulu okunikezwa yi-SFMC kudalwe kakhulu ukuthi imisebenzi eminingi ku-Marketing Cloud iqhutshwa imibuzo ye-SQL. Imisebenzi yokumaketha efana nokuhlukanisa, ukwenza kube ngokwakho, okuzenzakalelayo, noma ngisho nokubika kudinga umbuzo ohlukile we-SQL ku-Marketing Cloud ukuze abakhangisi bahlunge, bacebise, noma bahlanganise izandiso zedatha. Abadayisi abambalwa kuphela abanolwazi nekhono lokubhala, ukuhlola, nokulungisa imibuzo ye-SQL ngokuzimela, okwenza inqubo yokuhlukanisa idle isikhathi (yingakho ibiza) futhi evame ukuthambekela emaphutheni. Isimo esingaba khona kakhulu kunoma iyiphi inkampani ukuthi umnyango wezokukhangisa uncike ekusekelweni kwezobuchwepheshe ngaphakathi noma ngaphandle ukuze ulawule idatha yabo ku-SFMC.
I-DESelect igxile ekuhlinzekeni ngezixazululo zokunika amandla idatha yokumaketha ye-Salesforce AppExchange. Isixazululo sayo sokuqala sokudonsa nokuwisa, Ingxenye ye-DESelect yadalelwa abakhangisi abangenawo ulwazi lokubhala amakhodi, okubavumela ukuthi basebenzise ngokushesha ithuluzi phakathi nemizuzu embalwa nje yokufakwa ukuze bakwazi ukuqalisa ngaso leso sikhathi ngokuhlukaniswa kwamaqembu okuqondiwe kuwo. imikhankaso. Nge-DESelect Segment, abathengisi akudingeki babhale umbuzo owodwa we-SQL.
Susa ukukhetha Amakhono
I-DESelect inohlu lwezixazululo ezilungile zokwandisa i-ROI ku-Salesforce Marketing Cloud yezinkampani:
Susa ukukhetha Isegimenti inikeza izici zokuhlukanisa ezinembile kodwa ezinamandla ngokukhetha. Ukukhetha kuvumela abasebenzisi ukuthi bahlanganise imithombo yedatha futhi basebenzise izihlungi ukuze bakhiqize amasegimenti ngendlela egwema isidingo semibuzo ye-SQL. Ngenxa yethuluzi, abasebenzisi bangenza imisebenzi yokuhlukanisa ku-SFMC 52% ngokushesha futhi baqalise imikhankaso yabo efika ku-%23 ngokushesha, kuyilapho beqhubeka nokusebenzisa ngokugcwele amathuba amaningi anikezwe i-Marketing Cloud. I-DESelect inika amandla abakhangisi ukuthi bahlukanise, baqondise, futhi benze ukuxhumana kwabo kube ngokwakho ngokuzimela (ngaphandle kwesidingo sochwepheshe bangaphandle) nangobuhlakani obuningi kunangaphambili.
Susa ukukhetha Xhuma yisixazululo sokuhlanganisa idatha yokumaketha esenza ochwepheshe bezokumaketha ezishintshayo bakwazi ukonga isikhathi ngokuhlanganisa kalula nokugcina noma yimuphi umthombo wedatha ngama-webhooks (API) ku-Salesforce Marketing Cloud kanye/noma i-CDP ye-Salesforce nangemuva, asebenzisa lutho ngaphandle kwezici zokudonsa nokuwisa. Ngokungafani namathuluzi amakhulu okuhlanganiswa, i-DESelect Connect yakhelwe abakhangisi abahlakaniphile emsebenzini, okuyenza ibe lula, ngentengo ephansi uma iqhathaniswa nezinye izixazululo, futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Njengayo yonke imikhiqizo ye-DESelect, i-Connect ayidingi isikhathi sokuphumula ukuze ufakwe noma ukusetha, umane nje uxhume bese udlala. Okubaluleke kakhulu, akudingi ukuzibamba ngokwakho futhi yakhelwe ngemikhawulo ye-SFMC enanini lamakholi we-API.
Susa ukukhetha ukusesha akuyona into entsha, ibilokhu itholakala futhi isafana ne-Chrome Extension ukusiza abathengisi baseshe kalula noma yini kumafu wabo wokumaketha. Ibha yosesho ehlanganiswe ngokugcwele ikuvumela ukuthi ubheke Izandiso Zedatha, okuhlanganisa:
Kule nyanga, u-DESelect uphinde wakhipha i-Search in I-AppExchange. Isinqumo sokwengeza umkhiqizo endaweni yemakethe ye-Salesforce bekungenxa yesidingo esidumile esivela kubasebenzisi abasebenza ezinhlanganweni ezingasekeli izandiso ze-chrome. Manje, wonke umsebenzisi we-Marketing Cloud uthola izinzuzo zaleli thuluzi elisebenziseka kalula futhi elonga isikhathi.
Susa Ukukhetha Izici Zengxenye
Joyina izandiso zedatha ndawonye - Abasebenzisi bangasebenzisa ukudonsa nokuwisa ukuze bajoyine kalula izandiso zedatha ndawonye futhi bachaze ukuthi zihlobene kanjani. Abaphathi bangakwazi ukuchaza kusengaphambili lobu budlelwano.
Ungafaki amarekhodi - Ngokufana nokujoyina izandiso zedatha, abasebenzisi bangakhombisa amarekhodi abafuna ukuwakhipha ekukhethweni kwabo.
Yengeza imithombo yedatha – Kulula nge Susa ukukhetha ukwengeza oxhumana nabo abavela emithonjeni yedatha eyahlukene ndawonye.
Sebenzisa imibandela yokuhlunga - Abasebenzisi bangasebenzisa inqwaba yezihlungi kuzo zonke izandiso zedatha nemithombo, besekela wonke amafomethi enkundla.
Yenza izibalo – Imibhalo engezansi ivumela ukuqoqwa kwedatha nokwenza izibalo, njengokuthi kuthengwe okungakhi ikhasimende noma ukuthi ikhasimende lisebenzise malini.
Hlunga futhi ubeke imiphumela - Abasebenzisi bangakwazi ukuhlunga imiphumela yabo ngama-alfabhethi, ngosuku, nanoma iyiphi enye indlela enengqondo. Bangakwazi futhi ukukhawulela inani lemiphumela uma kudingeka.
Chaza futhi usebenzise izinhlu zokukhetha - Abasebenzisi banganikeza amanani namalebula wohlu olukhethiwe njengomphathi, okuvumela iqembu labo ukuthi lihlunge ngokuqiniseka okwengeziwe.
Setha amanani okwenziwa ngesandla noma asekelwe emthethweni - Abasebenzisi bangenza imiphumela yabo ibe ngeyakho, ngokubeka amanani okwenziwa ngesandla noma asekelwe emthethweni, isibonelo, Female Yiba Miss futhi Male Yiba Mfundisi.
Susa amarekhodi ngemithetho - Amarekhodi angakhishwa ngomthetho owodwa noma eminingi, kunikezwe kuqala okuthile.
Sebenzisa i-waterfall segmentation - Abasebenzisi bangasebenzisa imithetho ye-cascading ukusebenzisa 'isigaba sempophoma'.
Susa ukukhetha izindaba zempumelelo
Njengamanje, i-DESelect ithenjwa yimikhiqizo yomhlaba wonke efana neVolvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh, ne-A1 Telekom. Inqubomgomo yenkampani yokugcina ubudlelwano obuseduze namakhasimende ayo lapho ukuqeqeshwa nokusekelwa okuzinikele esigabeni sokuqala, noma ngabe uhlelo lokusebenza selulungile kusukela ngedethi yokufakwa, kuvumele izindaba zempumelelo eziqhubekayo.
Isibonelo se-Emerald: I-California-based Emerald ungu-opharetha wemicimbi emikhulu ebukhoma negxilile ye-B2B nemibukiso yezohwebo. Yasungulwa ngo-1985, lolu phawu oluhamba phambili ezimakethe luxhume amakhasimende angaphezu kwezigidi ezingu-1.9 emicimbini engu-142 kanye nezakhiwo zemidiya eziyi-16.
I-Emerald isanda kuqala ukusebenzisa i-SFMC. Ngokushesha ngemva kokusebenzisa ifu, ithimba labo lokumaketha elizenzakalelayo lithole ukuthi kuthembeke kangakanani emibuzweni ye-SQL engenaso isixazululo esisebenziseka kalula sabakhangisi abangenabo ubuchwepheshe be-SQL. Bathole ukungasebenzi kahle ekwakheni izandiso zedatha kusengaphambili futhi bazabalaza nokungaguquguquki kokuthi kufanele bachaze zonke izinkambu kusenesikhathi.
Ngaphambi kokusebenzisa okuthi DESelect, abakhangisi be-Emerald babengenakho ukufinyelela kusizindalwazi, njengoba ithimba labo elimaphakathi lakhe amasegimenti ngaphambilini. I-DESelect yasiza u-Emerald ekuvumela ithimba layo lezentengiso ukuthi lifinyelele futhi liphathe idatha ngesikhathi sakha amasegimenti ngempumelelo, nangokuzimela. Manje, babheke ngisho nokukhipha okuthi DESelect kubakhangisi ngokwabo ukuze banike amandla abasebenzisi babo be-SFMC ngokuphelele.
I-DESelect inyuse ukusebenza kahle ngo-50%. Kulula kakhulu ukwenza okuthile okukhangiswayo manje.
U-Gregory Nappi, Sr. Umqondisi, Ukuphathwa Kwedatha & Ukuhlaziya kwa-Emerald
Ukuze ufunde kabanzi ngokuthi kanjani Susa ukukhetha ingasiza inhlangano yakho:
Vakashela okuthi DESelect Hlela Susa ukukhetha Idemo
Tags: a1 ucingoApiukuguqulaukusesha okuzenzakalelayoisandiso se-chromeukusesha okuqukethweisandiso sedathaisandiso sedatha xhumaukuhlukaniswa kwesandiso sedathayeka ukukhethai-imeyili ithumela ukuseshaukusesha kwesifanekiso se-imeyiliizifanekiso ze-imeyliEmeraldukusesha izincazelo zokuhlungaisandiso se-google ChromeGregory NappiSawubonaFreshbuza imisebenzi searchbuza ukuseshasalesforceukuguqulwa kokuthengiselanai-salesforce cdpifu lokuthengisa labasebenzisfmct-mobileIzimoto zeVolvo zaseYurophu
U-Anthony uyi-CEO kanye nomsunguli we Susa ukukhetha, isinikezeli sedatha yokumaketha se-Salesforce AppExchange. Unentshisekelo ngeSoftware njengeSevisi, Marketing Automation, kanye nobuchwepheshe beSalesforce Marketing Cloud.
Sibaluleke Kangakanani Isithombe Sakho Sephrofayela Ye-LinkedIn?
Ungakuvula Kanjani Ukulandelela Okuzenzakalelayo kwe-Google Analytics UTM ku-Salesforce Marketing Cloud